Wararka - Maxaa aluminium u dhintaa - furitaanka caadada oo aad iyo aad u badan?
Macluumaadka aluminium ee warshadaha waa nooc ka mid ah aluminium-ka aluminium aluminium oo ay soo saartay aagga warshadaha ee loo isticmaalo alaabada astaanta. Aaladda Aluminiumku u dhinto macnaheedu waa marka lagu daro kuwa 20,30,40,50,60,80,90,100,120 iyo taxanaha kale ee caadiga ah ee aluminium, astaanta aluminium ee aluminiumku sidoo kale waxay yeelan kartaa qaab kale, markaa waa qaabayn u gaar ah aluminiumku. Maaha habayntu mid ka duwan, tan kale waa u gaar ahaanta.
Aluminiumku wuxuu u dhintaa - caadada furitaanka waa isla habka wax soo saarka iyo habka. Magac ahaan: wax soo saarka ugu horreeya ee caaryada uqalma, ka dibna u diyaarso aluminium aluminium ah oo tayo leh, ka dibna wax soo saarka mashiinka mashiinka ayaa noqon kara. Caaryada waxaa guud ahaan loogu talagalay iyadoo loo eegayo qaybta wanaagsan ee isticmaalaha, qaybta aluminium ee kala duwan, waxqabadka iyo miisaanka mitirka halbeegga iyo dhinacyada kale isku mid ma aha. Fur aluminium caadada u ah aluminiumka caadiga ah iyo aluminium caadi ah farqi uma dhexeeyo, haddii ay tahay qalab ama daaweyn dusha sare ah, marka lagu daro u habeynta, kuwa kale waa isku mid.
Sanadihii la soo dhaafay, saamiga suuqa ee aluminium furitaanka caaryada iyo qaabeynta ayaa sii kordheysa. Sababta ugu weyn ayaa ah in kororka warshadaha otomaatigga ay keeneen adeegsiga alaabada kaladuwan ee aluminiumka. Sidaa darteed alaabooyinka aluminium ee aluminiumka ah ayaa soo kordhay, sidaa darteed aluminiumku wuxuu u dhintaa caado furitaan badan oo caan ah, ayaa loo baahan yahay aad iyo aad u badan. Waxaa jira qaybo badan oo cusub, sida zigzags, zigzags iyo qaabab aan caadi ahayn, iyo sidoo kale midabbo loo dhameystiray.
Qalabaynta ayaa ahayd eray guud oo nolosha ah, oo ka tirsan qaybta raaxada fudud ee dadku badanaa sheegaan. Aluminium aluminium caadada furitaanka caado waa mid kale oo ka mid ah warshadaha aluminium aluminium, sheygan aluminium aluminium ah, aluminium aluminium ah oo furan furitaanka saamiga waa ka weyn yahay, aadna loo isticmaalay, baahida loo qabo hal-abuurnimo joogto ah iyo horumar si loola kulmo suuqa weligiis beddelaya.